Ihe ngosi Beijing ọhụrụ na-ekpughe mmepeanya mmadụ mbụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ihe ngosi Beijing ọhụrụ na-ekpughe mmepeanya mmadụ mbụ
E gosipụtara ihe ngosi ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ngosi 200 na ihe ngosi ahụ, nke akpọrọ Rice, Origin, Enlightenment: Exhibition Pụrụ Iche nke Shangshan Culture Archaeological Discovery na Zhejiang, iji gosi uru na uru nke ọha ọrụ ugbo osikapa nke omenala Shangshan nọchiri anya mmepeanya ndị China. yana ntinye aka na mmetụta ya na East Asia na ụwa.
Ihe ngosi ndị a gụnyere ọka osikapa carbonized nke malitere laa azụ 10,000 afọ gara aga, njakịrị nke ọrụ ite, nkume igwe nri na okwute akwa, yana ite ite na iko mara mma gwupụtara. Ha gosipụtara mmepe mmekọrịta ọha na eze, akụ na ụba, na ọdịbendị mgbe ọrụ ugbo osikapa ka malitere, yana ka obodo ndị China si ebi ndụ ma na-emepụta mmepụta mmekọrịta ọha na eze n'oge mbụ.
Emekwara nzukọ ọmụmụ ihe gbasara mmepeanya nke China na Zhejiang na National Museum of China dịka akụkụ dị mkpa nke ihe ngosi ahụ. Ndị ọkà mmụta ihe ochie a ma ama si China na ná mba ọzọ sonyeere ya. E mere mkparịta ụka banyere uru omenala Shangshan bara na akụkọ ihe mere eme na oge ugbu a, yana ọnọdụ omenala na Chinese na mmepeanya mmadụ.
Na nzukọ ọmụmụ ihe ahụ, Prọfesọ Dorian Q Fuller sitere na University College London Institute of Archaeology webatara, site n'echiche zuru ụwa ọnụ, uru nke omenala Shangshan na ntinye aka na mgbanwe Neolithic. Li Liu, prọfesọ na Stanford Archaeology Center, Mahadum Stanford kọwara omenala Shangshan na mmalite nke mmanya ọka.
N'ịbụ nke dị na etiti na mgbada nke osimiri Yangtze dị na China, saịtị Shangshan bụ ebe mbụ a maara nke ugbo osikapa n'ụwa. Dị ka mmalite nke ugbo osikapa, omenala Shangshan nwere ọnọdụ dị mkpa na nhazi nke mmepeanya ndị China.